Mabhuku aElisabet Benavent, imwe yeanonyanya kuverengerwa mumanyaya erudo | Zvazvino Zvinyorwa
"Elisabet Benavent Libros" kutsvaga kwakadzokororwa pawebhu yeSpanish, uye iyo inodzosera data rine chekuita nesaga Valeria. Muunganidzwa uyu unosanganisira mabhuku mana ekutanga nemunyori, ayo aakatora nawo vanopfuura zviuru zvitatu zvevaverengi pasi rese. Nekuda kwekubudirira kwakawanikwa, iyo chikuva cheNetflix chakatanga mwaka wekutanga wenyaya muna 3.000.000 Valeria.
Elísabet Benavent inozivikanwa munyika yemasocial network se "Betacoqueta", zita raakatora nekutenda kublog rake. Mukadzi wechidiki wekunyora anodana zita rake "kudanana-kwemazuva ano". Pasi pechiratidzo ichocho yakagadzira anokwana makumi maviri emabasa, mairi - kuwedzera kune saga Valeria- kuva nemutsauko: trilogy, mana bilogies uye mashanu ega nyaya
1 Ongororo pfupi yehupenyu hweElísabet Benavent
2 Mabhuku akanakisa aElísabet Benavent
2.1 MuValeria's Shoes (2013)
2.2 Mumwe munhu wandisiri (2014)
2.3 Iwo Mashiripiti Ekuve Sofia (2017)
2.4 Ndoita Sei (2018)
2.5 Chirevo Chakakwana (2020)
3 Mabhuku aElísabet Benavent
Ongororo pfupi yehupenyu hweElísabet Benavent
Elisabet Benavent Iye akazvarwa mu1984 kuGandía, masevhisi eValencian kuSpain. Akapedza zvidzidzo zvake zvehunyanzvi kuECU Cardenal Herrera University, muValencia; ipapo Akapedza degree neAudiovisual Kutaurirana. Makore gare gare, iyo Gandiense akaita tenzi muKutaurirana neArt kuComplutense University yeMadrid, guta raakagara kubva ipapo.
Mu 2013, akafurirwa neshamwari dzake, akazvimiririra akaburitsa bhuku rake rekutanga: Mune shangu dzaValeria, kuburikidza nepuratifomu yeAmazon. Nekuda kwekubudirira kunoshamisa pawebhu, munyori akafonerwa naWedhiyo Suma kuti ibudiswe zviri pamutemo chikamu chekutanga ichi nemamwe mabhuku anoumba saga Valeria.
Mabhuku akanakisa aElísabet Benavent
Mune shangu dzaValeria (2013)
Iri ndiro bhuku rekutanga rakanyorwa naElísabet Benavent -uye na the saga Valeria -. Iyo inoverengeka yerudo inoitika muguta reMadrid. Iri basa rakatengesa anodarika miriyoni emakopi uye nekukurumidza rakaita kuti munyori wenhau ave "anotengesa zvakanyanya". Muna 2020, chikuva cheNetflix chakatanga kuratidzira akateedzana nesaga, uko Benavent anoshanda semutariri wekugadzira.
Nyaya yacho yakanangana nehupenyu hweshamwari ina dzisingaparadzanisike: Valeria, Nerea, Carmen naLola. Iyo huru rangano inotenderera paValeria, munyori akaroora rudo rwake rwekuyaruka, uyo mubatanidzwa wake unokanganiswa nehumwe. Asingagutsikani uye achitsvaga kurudziro yebhuku rake rinotevera, anosarudza kusangana neshamwari dzake kubhawa. Husiku ihwohwo anosangana naVictor, uyo anomutapa nekumuzadza nekusahadzika.
Iyo rondedzero inotaurira hupenyu hweumwe neumwe wevakadzi ava, vane hunhu hwakasiyana, asi vanochengeta chisungo chisinga dambuke cheushamwari. Izvi ndozvazvinoita nyaya izere nerudo uye nekurwadziwa pamoyo, zvishuwo, mufaro uye kusuwa izvo zvinofambidzana nekarongedzo kekusetsa kwakanaka uye yakawanda yemabiko manheru.
Mune shangu dzaValeria ...
Mumwe munhu handisi (2014)
Ndicho chikamu chekutanga chetatu Sarudzo yangu; Iyo inoverengeka yerudo ine kubata kweeroticism kunoitika munharaunda yeMadrid. Hunhu hwayo hukuru mutori wenhau wechidiki uyo anoshuvira rimwe zuva kuti awane mubairo Pulitzer, Asi, kana adzingwa, zvirongwa zvake zvinoparara. Mukana mutsva mune imwe ndima yebasa uchaita kuti asangane nevarume vaviri vanozoshandura hupenyu hwake.
Alba mukadzi akazvipira kutapi venhau, asi, asingashandi uye akamanikidzwa kurarama, anofanirwa kugadzirisa chinzvimbo chemunyori. Ari munzira kuenda kuzuva rake rekutanga rebasa, anosangana nemurume akanaka ane chitarisiko chinonyengera pachiteshi chezvitima. Izvo zvinomusiya achifungisisa. Anotarisira, anoramba achienda kwaari kuenda; anouya kuhofisi uye anotora hombe kushamisika pamusangano su jefe: ndiHugo, murume uya asinganzwisisike waakayambuka naye nguva dzapfuura.
Sezvaunoramba uchiita basa rako, Alba anosangana nemumwe murume wechidiki-Nicolás-, uyo akamubatawo zvine simba. Hugo naNicolás havasi vashandi pamwe chete, asiwo shamwari dzakanaka nevagara navo. Vaviri vanomukomberedza nemazango avo uye vanodzosera nyika yake pasi nechikumbiro chaasina kuzokwanisa kuramba.
Mumwe Munhu Handisi (Wangu ...
Iwo mashiripiti ekuva Sofia (2017)
Iyo yano yazvino nyaya yekudanana ine zano rakagadzwa muMadrid uye hunhu hwayo musikana anonzi Sofía. Chii chimwe, ndiro bhuku rekutanga rebhaibheri Iwo mashiripiti ekuva; mutangire iye: saga Valeria, trilogy Sarudzo yangu uye bilogies Silvia y Martina.
Sofía mukadzi akajairika uye akazvimiririra musikana mudiki uyo anogara muMadrid uye anofarira kushanda kuEl café de Alejandría. Kunyangwe akatambura kuora moyo kwerudo, akakwanisa kuzvikunda uye kufara zvakare. Rimwe zuva senge chero ripi zvaro, murume akanaka uye asina tsitsi anopinda munzvimbo yekudyira: Hector; iye anomutuka uye nekuda kweizvi zvese vakaita kunetsana.
Mazuva akafamba Héctor anodzoka kuzokumbira ruregerero kuna Sofía uye ndipo panotangira zvaanotsanangura sekuti "mashiripiti: magumo maviri anopindirana". Kunyangwe paine chemistry yakanaka pakati pevaviri, pane kudzoka shure: Héctor ane musikana wepamutemo, mukadzi anoyevedza nerunako rwake. Izvi zvinonetsa nyaya pakati paSofía naHéctor, iyo ichave yakakomberedzwa nerudo, mutambo nekutambura.
Iwo mashiripiti ekuva Sofia ...
Takanga tiri nziyo (2018)
Ndiyo yekutanga kopi yeiyo biology Nziyo nendangariro; inyaya yerudo yakaiswa muMadrid. Benavent inopa shamwari nhatu dzepamwoyo: Macarena, Jimena naAdriana, vese vaine zano ravo; zvisinei, iyo yekutanga ine chinzvimbo chikuru.
Macarena Iye mukadzi wechidiki ane basa rakanaka, asi Iye anofanirwa kubata pamwe neakaomesesa bhosi uye rudo kubva munguva yakapfuura uyo anodzoka kuzoomesa hupenyu hwake.
Muna 2020, Netflix yakazivisa kutanga kwekutora mifananidzo yeiyo firimu de Nziyo nendangariro, rakaumbwa nemabhuku: Takanga tiri nziyo y Tichava ndangariro. Iyi firimu ichafambiswa naJuana Macías uye nyeredzi María Valverde naAlex González; kuratidzwa kwayo kunotarisirwa mu2021.
Macarena mukadzi wechidiki inoshanda kune influencer fashoni inonetsa kwazvo, uyo, nemafungire ake mudzvinyiriri, haimurege anzwe akasununguka nebasa rake. Rimwe zuva Maca inosangana naLeo, aimbova mukomana wake -Ndiani ari kupfuura neMadrid. Izvi zvinounza zvakavigwa manzwiro kuchino kuti akafunga kuti akasiya kumashure ane magumo anorwadza. Mamiriro ezvinhu akasiyanasiyana anopa nzira kuhondo pakati pekufunga nemoyo.
Kune rimwe divi, kune shamwari dzepedyo dzaMacarena: Jimena naAdriana; zvese mumamiriro akasiyana erudo. Jimena anotambura kuti akunde nguva yakaoma munguva yakapfuura kuti avhure mikova yake kune rudo nyowani. Pane kudaro, Adriana akaroora uye anofara uye anorarama hupenyu hwakanaka, kunyange hazvo achida chimwe chinhuzve.
Taive nziyo ...
Ngano yakakwana (2020)
Ndiyo yekupedzisira bhuku raElísabet Benavent, mariri anochengetedza maitiro ake epanguva yechirudo. Iyo nyaya inoitika kuGreek uye inorondedzerwa mumazwi maviri neainyanya kutaurwa, Margot naDavid.. Mumwe nemumwe anopa chiono kubva kunharaunda yavo, vachiratidza zviitiko zvemakirasi maviri ehukama akasiyana.
Margot akaberekerwa muchivako chegoridhe —Mumhuri yenzanga yepamusoro, varidzi veketani hombe yehotera. Ndiye mugari wenhaka mukuru, ane mukomana akakwana uye ane basa reroto.
Kune rumwe rutivi, David anorarama zvakasiyana zvachose: yakaoma mamiriro ehupfumi, mabasa mazhinji uye hukama hunopesana. Mugumo wavo unouya pamwechete rimwe zuva ndichimhanya; ipapo hupenyu hweese hunochinja zvachose.
Margot, kunyangwe a kuva mukadzi ane hupenyu hwakakwana ", kunzwa kusafara. Paakasangana naDavid, unosangana nechimwe chokwadi icho isa hupenyu hwako kumashure. Iye, kuchikamu chake, achangopedza rudo rwake uye nyika yake yapidiguka.
Mushure memusangano usingatarisirwe nekugovana zviitiko, David anoshamisika kuona margot, ane hunyanzvi hwakawanda, achinzwa zvakashata saiye. Ivo vaviri vanokohwa hushamwari hunoshamisa huchavhura nzira kwavari uye mikana yakawanda yekufara.
Ngano yakakwana ...
Mune shangu dzaValeria (2013).
Valeria mugirazi (2013).
Valeria mutema nemachena (2013).
Valeria akashama (2013).
Kudzingirira Silvia (2014)
Kuwana Silvia (2014)
Trilogy Sarudzo yangu
Mumwe munhu handisi (2014).
Mumwe akaita sewe (2015).
Mumwe munhu seni (2015).
Biology Martina (2016)
Martina nemaonero egungwa (2016).
Martina pavhu rakaoma (2016).
Chitsuwa changu (2016)
Biology Iwo mashiripiti ekuva… (2017)
Iwo mashiripiti ekuva Sofia (2017).
Iwo mashiripiti ekuva isu (2017).
Iri bhuku rekunyora nderangu (2017)
Biology Nziyo nendangariro (2018)
Takanga tiri nziyo (2018).
Tichava ndangariro (2019).
Chokwadi chese chenhema changu (2019)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » Mabhuku aElísabet Benavent